Ujyaalo Times | केपी ओलीले लिपुलेक कहा छ हँ भनि भनि केक काटे रे ?
केपी ओलीले लिपुलेक कहा छ हँ भनि भनि केक काटे रे ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जन्मदिनको अवसरमा नेपालको नक्सा काटेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको समयमा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले सम्बाद चौतारीको कार्यक्रममा केपी ओलीले लिपुलेक कहा हँ छ भनि भनि केक काटे रे भन्ने सुनेको हो त्यो कल्पित कुरा हो कि […]
दुनियाँ बदल्न हिँडेका मान्छेहरू नै यसरी बद्लिए कि, सुन्दा पनि घृणा लाग्ने । निर्धालाई लाग्ने कानुन शक्तिको आवरणमा ढाकिएका ती मानिसहरूको हकमा लागु नहुँदा अहिले थुप्रै चेली प्रताडित जीवन बिताउन बाध्य छन् । शुरु गरौँ, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डकै निवासबाट । […]
प्रचण्डको प्रस्तावले नेकपामा तरंग : गौतम निवासमा ‘गोप्य’
काठमाडौं । सभामुख चयनका सन्दर्भमा प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवासमा ओली इतरका नेताहरुको ‘गोप्य’ जमघट भएको छ । नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति जुट्न सकस भइरहेका बेला भएको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । भैंसेपाटीस्थित गौतम निवासमा […]
नागरिकता माग्दा खुकुरी प्रहार
काठमाडौं । नागरिकता बनाई दिन माग गर्दा सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिका–१२ दमाबतीटोलकी २८ वर्षीया लक्ष्मी यादवमाथि मंगलबार दिउँसो उनकै पति महिनारायणले खुकुरी प्रहार गरी हत्या प्रयास गरेका छन् । लक्ष्मी तरकारी बारीतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा मोटरसाइकलमा आएका महीनारायणले तँ नागरिकता […]
अमेरिकाविरुद्ध इरानको मिसाइल आक्रमण
काठमाडौं । इरानले इराकस्थित अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्पमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा बगदादमा भएको ड्रोन हमलामा देशका शीर्ष कमाण्डर कसेम सोलेमानी मारिएपछि त्यसको प्रतिकार गरेको इरानले जनाएको छ । इराकमा अमेरिकी सुविधाहरूमा हमला गरेको समाचारमा […]
काठमाडौँ । आर्थिक समृद्धि विना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कहिले पनि संस्थागत हुन सक्दैन । झन्डै दुई तिहाईका स्थिर सरकार भएका बेला जनआंकाक्षा चुलिएको हुन्छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य किटान गरेका […]
दोहोरी र क्लबमा पनि यौनकर्मी
काठमाडौँ । ठमेल यौनकर्मी र यौन क्रियाकपालको केन्द्र हो भनेर ‘रातो बत्ती’ बालिरहनु पर्दैन वा रातो बत्तीका लागि रात कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यौन व्यवसायको मोलमोलाईले ठमेल रातमा मात्रै होइन, दिनमा पनि उत्तिकै तात्तिने गरेको छ । त्यहाँका गतिविधि […]
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीमा उत्पन्न पछिल्लो विवादबारे आफूनिकटका जिल्ला सभापतिसँग पराशर्म थालेको छ । संस्थापन इतर समूहलाई ४३ जिल्लाका जिल्ला सभापतिले साथ दिएका छन् । सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा ४३ जिल्ला सभापतिसँग वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित […]
परमाणु सम्झौताबाट बाहिरियो इरान, ठूलो युद्धको संकेत
इरान । सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौताबाट आफू पूर्ण रुपमा बाहिरिएको घोषणा गरेको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा इरान र अमेरिकासहितका शक्ति राष्ट्रबीच परमाणु सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम सीमित गर्ने […]